(mjournal):Maamulka gobolka Banaadir ayaa iska fogeeyay inuu shaqaalaha maamulka ka mid ahaa nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay isku day fashilmay oo lagu doonayay in lagu dilo guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan). Maamulka...
(mjournal):Madaxweynihii hore ee Puntland Jeneraal Cadde Muuse ayaa ka sheegay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wax yar kaddib markii uu halkaas gaaray maanta in uu billaabay dadaallo lagu xallinayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Puntland. Cadde ayaa saxaafadda u sheegay...
(mjournal):Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, saraakiisha ciidamada dowladda...
Mudaneyaasha Baarlamanka Oo Sameeyay 15 Gudi Oo Joogto Ah.
(mjournal):Mudaneyaasha Baarlamanka Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku kankoodii maanta ku sameeyay gudiyo joogto ah kuwaas oo gaara 15 gudi. Kulankii maanta ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho xildhibaanada ayaa waxaa shir...
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Oo Khartuum Kulmay Cumar Al-Bashiir.(SAWIRRO)
(mjournal):Madaxweynaha jamhuurriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Sudan kula kulmay dhiggiisa dalkaas Cumar Xasan Al-Bashiir. Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya Cabdikariim Xuseen...
Xaflad Sanadka Cusub Oo Lagu Qabtay Magaalada Milwaukee ee Gobolka Wisconsin
. Xaflado lagu soo dhoweynayey sanadka cusub ee 2013-ka, laguna sii sagootinayey sanadkii dhamaaday ee 2012-ka ayaa xalay lagu qabtay magaalada Milwaukee, ee gobolka Wisconsin, USA. Xafalada waxaa soo qabanqaabiyay oo suura geliyey inay qabsoonto Kalahari Coffe Ayaa lag...
2 Qof Oo Ku Dhimatay Dabkii Shanaad Ee Ka Kaca Degmada Maxaas.
(mjournal):Labo qof ayaa ku geeriyooday dab saaka ka kacay dhul miyi ah oo hoos-taga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha maamulka degmada Mu’min Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in labada qof ay ku dhinteen dab ka kacay tuulooyinka Khayraanle,...
Kenya Oo Ku Eedeysay Askar Horey Uga Tirsanaa Ciidanka DKMG Inay Ka Dambeeyaan Weerarrada Gaarisa.
(mjournal):Dowladda Kenya ayaa ku eedeysay askar horey uga tirsanaa ciidanka dowladdii federaalka ee ku-meel-gaarka ahayd ee Soomaaliya inay ka dambeeyaan weerarrada iyo ammaan-darrada ka jirta magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi-Bari Kenya. Guddoomiyaha degmada Gaarisa...
Pakistan Oo Sii deeysay Hogaamiyaal Ka Tirsan Ururka Talibanka.
(mjournal):Dowlada Pakistan oo bishii November ee sanadkii tagay siideysay 18 kamid ah saraakiisha Talibanka ee ku xirnaa dalkeeda, ayaa todobaadkan siideysay 8 kale oo ka tirsan hogaanka Talibanka oo uu ku jiro Nuradiin Turabi oo ahaa Wasiirkii Cadaalada ee xukuumadii Talibanka...
Baarlamanka Oo Maanta Kulmaya Kana Doodaya Dhismaha Guddiyada Baarlamanka.
(mjournal):Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta kulmaya kana doodaya arrinta ku saabsan sameynta guddiyada Baarlamanka. Kulanka maanta ee Barlamanka Soomaliya ayaa ajandihiisu yahay guddiyada Barlamanka ee 16-ka ah, kuwaas oo guddi dhawaan loo xilsaaray ay kasoo tala bixiyeen...
Beled-Xaawo Oo Bandow Lagu Soo Rogay
(mjournal):Maamulka degmada Beled-Xaawo ayaa shaaciyay inuu bandow saaran yahay magaalada xilliyada habeenkii. Bandowga ayaa dhaqan-galaya caawa, wuxuuna billaaban doonaa saacadu marka ay tahay 09:00 PM. Lama shaacin muddada uu ku eg yahay bandowga. Taliyaha amniga degmada...
(mjournal):Maxkamad ku taalla dalka Itoobiya ayaa ku heshay 10 nin eedeymo la xiriira inay xiriir la leeyihiin kooxda al-Shabaab ee ka dagaallanta Soomaaliya. Garsooraha maxkamadda Bahiru Darecha ayaa sheegay inay eedeysanayaasha sugayeen lacag ay ku fulin rabeen weerarro ka dhan...
(mjournal):Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Sudan kana qeybgalay xuska sanadguuradii 57 aad ee ka soo wareegtay madaxbanaadida dalkaasi ayaa la filayaa in maanta uu gaaro maagaalada caasimada ah Kharduum....
(mjournal):Ganacsatada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Soomaalida ku nool qurbaha ayaa laga codsaday inay ka qeyb-qaataan dib u dhiska tiyaatarka qaranka. Duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Tarsan ayaa sheegay inuu tiyaatarku ka mid yahay xarumaha muhiimka ah ee dadweynaha ee si...
(mjournal):Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Augustine Mahiga ayaa ugu hambalyeeyay hoggaanka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sanadka cusub. Warqaddiisa wuxuu ku xusay in sanadkii tegay uu Soomaaliya u ahaa mid taariikhi ah oo horumarro waa-weyn laga...
« First‹ Previous382383384385386Next ›